सिद्धार्थ शुक्लाको अन्तिम संस्कारमा के भयो त्यस्तो ? कुशल टण्डन रिसाए, शिद्धार्थसंग मागे माफी – Classic Khabar
सिद्धार्थ शुक्लाको अन्तिम संस्कारमा के भयो त्यस्तो ? कुशल टण्डन रिसाए, शिद्धार्थसंग मागे माफी
September 5, 2021 123
बालिका वधु फेम र बिग बोस १३ का विजेता सिद्धार्थ शुक्लाको अचानक मृत्यु बाट सबै स्तब्ध भएका छन्। बलिउड र टेलिभिजन स्टार्सले सिद्धार्थको बिदाइमा शोक व्यक्त गरेका छन्। सिद्धार्थ शुक्लाको बिहीबार बिहान हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो। सिद्धार्थ शुक्ला फिट थिए र धेरै राम्रो जीवन बिताइरहेका थिए। उनीसँग धेरै ठूला प्रोजेक्टहरु थिए, त्यसैले उनको आकस्मिक मृत्युको खबरले उनको परिवार र प्रशंसकहरुलाई मात्र नभई मनोरन्जन जगतका मानिसहरुलाई पूरै हल्लायो।
अन्तिम संस्कारको भिडियो हेरेपछि कुशल टण्डन रिसाए सिद्धार्थ शुक्लाको अन्तिम संस्कार शुक्रबार गरिएको थियो। यस क्रममा, शहनाज गिल सहित सबैजना आफ्नो साथी सिद्धार्थलाई बिदाई गर्न आए। तर यस समयमा कलाकारहरु पापराजीले गरेको व्यवहार देखेर धेरै परेशान थिए र सोशल मीडियामा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सिद्धार्थका घनिष्ठ मित्र कुशल टण्डन पनि धेरै भाइरल फोटो र भिडियो देखेपछि रिसाए र पापाराजीको व्यवहारलाई ुलाजमर्दोु भने।
कुशल टण्डनले ताराहरुको वर्गीकरण गरे
कुशलले पापाराज्जीको यो कार्यप्रति मात्र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेनन्, तर उनले मास्क लगाएर क्यामेराको लागी पोज दिने ती कलाकारहरुको पनि कक्षा लिए। आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एउटा भिडियो सेयर गर्दै कुशलले लेखेका छन्, ुशर्ममा टाउको निहुराउनुहोस् । जे भइरहेको छ त्यो धेरै नराम्रो छ। यदि तपाइँ साँच्चै कसैलाई सम्मान दिन चाहानुहुन्छ, तब दिवंगतको आत्माको लागी प्रार्थना गर्नुहोस् यस्तो अवसरमा फोटो खिचाउने होइन ।
माफी माग्दै सिद्धार्थ शुक्लासंग भने कुशल टण्डनले आफ्नो पोस्टमा सिद्धार्थ शुक्लालाई माफी माग्दै लेखेका छन्, माफ गर्नुहोस् सिड, म आत्म शान्तिको कामना गर्छु । मिडियामा पनि आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुशलले लेखे, ुयो धेरै लाजमर्दो छ। यस्तो कभरेज गर्नको लागी सबै मिडियामा लाज। यदि यो तपाइँको नजिक कोहि गुमाउँदा तपाईले गर्ने ब्यवहार त्यस्तै हुन्छ ?
Prevमन्दिरको जग्गा बेचिसके महन्थले, विवाहमण्डपको भूमि भूमाफियाको खल्तीमा
Nextबन्जीजम्प गर्ने क्रममा युवतीको मृत्यु
विहे गरेको २० दिनमै भागेकी बेहुलीलाई श्रीमानको सन्देश, यति छिटै धो’का दिनु थियो भने किन विवाह गर्यौ ? (भिडियो हेर्नुस्)
ऋषि धमलालाइ गायिका मधु छेत्रीले यस्तो भनेपछि अर्की गायिका टिका सानु लजाइन